Nzira Yekuchengeta Faux Leather
Kuongorora kwekambani / Mbiri
Vatengi vedu / Vashandi
Mabasa / Exhibitions
faira tireyi uye rack
imba kana kushongedzwa kwehotera
menyu uye chitupa chinobata
imba yekuisa sets
Zvishongo uye bhokisi rekutarisa
> Maitiro Ekuchengetedza Faux Leather
Faux yeganda haina kudhura, inogadzikana inogadzirwa neimwe nzira kune yeganda chairo. Inoshandiswa kumidziyo, mbatya, upholstery yemota, mabhegi, mabhandi uye nezvimwe. Faux dehwe rinogona kuwanikwa mumhando dzakasiyana, senge polyurethane, vinyl kana faux suede dehwe. Imwe yeidzi nzira dzinogona kucheneswa mune mafashoni akafanana, nemimwe misiyano yakakosha, inobvumidza kucheneswa kwemvere dzemhuka, guruva, tsvina uye mafufu Izvi zvinochengeta zvipfeko zvako nemidziyo zvichitaridzika zvitsva kwenguva refu.
1, Soak mucheka kana chipanje mumvura uye pukuta pasi pako.
Iwe uchazoda kushandisa inodziya mvura. Kupukuta nenzira iyi kunobata guruva, tsvina uye mamwe marara. Polyurethane inoshambidzwa zviri nyore pane zvakajairwa dehwe, uye izvi zvinokwana kuchengetwa kwemazuva ese uye isina huso huso
2,Shandisa bhari yesipo pane yakasviba yakaoma.
Kunyangwe uchiita nechitema kana tsvina yakakwizwa mukati, mvura yakapusa inogona kunge isingakwani. Shandisa sipo isina kuiswa kuti uone kuti hapana makemikari kana masara anogona kukanganisa ganda. Bvisa bhawa pane yakashata yakaoma.
Iwe unogona zvakare kushandisa sipo yemvura kana yekushambidza dhishi kune ino nhanho
3 ，Pukuta chero sipo nejira nyoro.
Pukuta zvakakwana kusvikira pasi yanyatsojeka sipo. Kusiya sipo pamusoro kunogona kuikuvadza.
4,Rega nzvimbo yacho iome.
Kana iwe uchichenesa chinyorwa chekupfeka, unogona kuchisungirira kuti chiome. Kana uchibata nemidziyo, ingo ita shuwa kuti hapana anogara kana kuibata kusvikira yanyatsoomeswa.
Iwe unogona kupukuta kumeso kwako pasi nejira rakaoma kuti umhanyisa kuomesa maitiro.
5,Tsvina vinyl inodzivirira pamusoro pako.
Izvi zvigadzirwa zvinobatsira kudzinga guruva uye hutsinye, zvichiita kuti kuchenesa kushome zvakanyanya. Ivo vanowanzo chengetedza kubva ku UV radiation zvakare. Mushure mekuvhara pamusoro mune yakachena, pukuta yakachena netowel
Post nguva: Dec-28-2020
MAMBO Shumba LIMITED